Akụkọ - know maara stepper moto
Okpokoro Spindle Motor
Onye ọkwọ ụgbọala Servo
stepper ọkwọ ụgbọala
Emechiela akaghị stepper moto na ọkwọ ụgbọ ala
Usoro Nchịkwa CNC
Plasma cutter njikwa
You maara stepper moto
Stepper moto bụ ihe na-emeghe-akaghị akara akụrụngwa na-agbanwe eletriki usu mgbaàmà n'ime angular mwepụ ma ọ bụ linear mwepụ. N'ihe banyere enweghị mbugharị, ọsọ moto, nkwụsị ọnọdụ naanị dabere na akara ngosi ụda na ọnụọgụ ọnụọgụ, na mgbanwe ibu anaghị emetụta ya, ya bụ, ịgbakwunye akara ngosi ụda na moto ahụ, moto ahụ ga-atụgharị nzọụkwụ Angle. Dị adị nke a linear mmekọrịta, tinyere ndị stepper moto naanị oge njehie na-enweghị agwakọta njehie na na. Ọ na - eme ka ọ dị mfe iji iji stepper iji chịkwaa ọsọ, ọnọdụ na mpaghara njikwa ndị ọzọ.
1.Stepper moto atụmatụ
<1> ntụgharị ntụgharị bụ ihe kwesịrị ekwesị na ntinye aka, yabụ enwere ike nweta ihe achọrọ dị elu na nkenke nkenke site na iji njikwa mmeghe.
<2> mmalite dị mma, nkwụsị, nzaghachi ziri ezi na nke na-adịghị mma, njikwa dị mfe.
<3> nzọụkwụ ọ bụla nke njehie Angle dị obere, ọ nweghịkwa njehie agwakọtara.
<4> n'ime uzo a na-achịkwa, ọsọ nke ntụgharị dị ka oge nke usu, ya mere oke nnyefe dị oke.
<5> na-ezu ike, na stepper moto nwere a elu na-ejide torque-anọ na nkwụsị ọnọdụ, na-enweghị mkpa iji breeki ka ọ ghara bugharia kpamkpam.
<6> nwere oke RPM.
<7> ntụkwasị obi dị elu, enweghị mmezi, ọnụ ala nke usoro ihe niile.
<8> mfe ida ụkwụ na elu na-agba
<9> na -emepụta iwepụta ụda ma ọ bụ ụda na oge ụfọdụ
2.Terminology maka stepper moto
* Ọnụ ọgụgụ: a na-ejikarị logarithm nke ihe ndị na-akpali akpali nke na-emepụta oghere magnetik maka okporo osisi N na S. M.
* Ọnụ ọgụgụ nke usoro: Ọnụ ọgụgụ nke ihe achọrọ iji mezue mgbanwe oge nke magnetik ma ọ bụ ọnọdụ nchịkwa na-anọchi anya N, ma ọ bụ ọnụọgụ pulses achọrọ maka moto ahụ iji gbanwee nkuku ezé. Were igwe eletrik anọ dịka ọmụmaatụ, enwere usoro mmebi iwu nke anọ, ya bụ AB-BC-CD-DA-AB, usoro ụzọ asatọ na-egbu egbu, ya bụ A-AB-B-BC- C-CD-D-DA-A.
* Nzọụkwụ Nzọụkwụ: nke kwekọrọ na mgbaàmà usu, na-anọchi anya nkuku nkuku nke rotor moto. = Ogo 360 (ọnụ ọgụgụ nke rotor ezé J * ọnụ ọgụgụ nke usoro nchịkwa). Were moto abụọ nke anọ na nke anọ nwere ezé rotor dị ka ihe atụ nke moto 50. Maka nhazi nke okpukpu anọ, nkuku nzọụkwụ bụ = 360 degrees / (50*4)=1.8 degrees (nke a na-akpọkarị dum), ma maka nkwụsị ụkwụ asatọ, nzọụkwụ nzọụkwụ bụ = 360 degrees / (50 * 8) = Ogo 0.9 (nke a na-akpọkarị ọkara nzọụkwụ).
* Ikwunye ikike: mgbe moto na-adịghị ike, na kpochidoro torque nke moto rotor onwe ya (kpatara harmonics nke eze nha nha nke ndọta na n'ibu njehie).
* Static torque: kpochidoro oge nke moto aro mgbe moto na-adịghị agbagharị n'okpuru gosiri static electric edinam. Nke a torque bụ ọkọlọtọ ka tụọ olu (geometric size) nke moto na bụ onwe ha nke na-akwọ ụgbọala voltaji na ike ọkọnọ. Agbanyeghị na ọnụọgụ ọnụọgụ ọnụọgụ ọnụọgụ nke ọnụọgụ nke electromagnetic na-emetụta ikuku ikuku n'etiti rotor-ofu, ọ gaghị abụ ihe amamihe dị na ya iji belata ikuku ikuku ma mee ka ampere-ntụgharị dịkwuo elu iji meziwanye ihe ahụ torque, nke ga-eme ka moto kpo oku na n'ibu mkpọtụ.
Post oge: Dec-02-2020
Ngwaahịa na-ekpo ọkụ, Sitemap
Ọrụ Stepper Motor, 220 Volt Ọrụ Servo Motor, Emechiela Loop Stepper Motor Driver, 6 Waya Stepper Motor, Servo Motor Actuator, Ngwakọ Stepper Motor,